Kigali ilaa Doha duullimaadyo aan joogsi lahayn hadda waxaa leh Qatar Airways iyo RwandAir heshiis cusub oo codeshare ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Kigali ilaa Doha duullimaadyo aan joogsi lahayn hadda waxaa leh Qatar Airways iyo RwandAir heshiis cusub oo codeshare ah
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ruwanda News • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadyada cusub ee RwandAir ee Kigali - Doha duulimaadyada aan joogsiga lahayn laga bilaabo December waxay bixin doontaa khibrad safar oo aan kala go 'lahayn oo Afrika iyo adduunka isku xirta.
Qatar Airways iyo RwandAir ayaa maanta kala saxiixday heshiis codeshare oo dhameystiran.
Macaamiisha labada diyaaradood ayaa ka faa'iideysan doona helitaanka ku habboon in ka badan 65 goobood oo codeshare caalami ah.
Markabka sidda calanka Rwanda ayaa sidoo kale bilaabi doona duulimaadyo cusub oo aan joogsi lahayn inta u dhexeysa xaruntooda Kigali iyo Doha laga bilaabo bisha December.
Qatar Airways iyo RwandaAir ayaa saxeexday heshiis codeshare oo dhammaystiran si loogu siiyo socdaalayaasha xulasho dheeraad ah, adeeg la wanaajiyay iyo isku xirnaan ballaaran oo lala yeesho in ka badan 65 goobood oo ku baahsan Afrika iyo adduunka intiisa kale. Iyada oo qayb ka ah heshiiska, markabka calanka Rwanda ayaa sidoo kale bilaabi doona duulimaadyo cusub oo aan joogsi lahayn inta u dhexeysa xaruntooda Kigali iyo Doha laga bilaabo December.
Heshiisku wuxuu faa'iido u leeyahay dadka safarka ah ee ka kala yimid daafaha dunida ee la duulaya labada shirkadood, kuwaas oo ballaadhiya shabakad kasta oo side. Rakaabku waxay ku raaxaysan karaan fududeynta iibsashada duullimaadyada isku xira labada diyaaradood iyagoo adeegsanaya hal nidaam boos celin oo aan kala go 'lahayn, oo fududeynaya tigidhada tigidhada, gelitaanka, fuulitaanka iyo hababka jeegga boorsooyinka safarka oo dhan.
Qatar Airways Madaxa Fulinta Kooxda, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri “Waxaan la wadaagnaa Rwanda xiriir aad u dhow oo iskaashi ah waana soo dhaweynaynaa RwandaAiradeegga cusub ee aan kala joogsiga lahayn ee u dhexeeya Kigali iyo gurigayaga Doha. Heshiiskan codeshare oo dhammaystiran, waxaa naga go'an inaan gaarsiinno xulasho iyo isku xirnaan ballaaran macaamiisheena Afrika iyo adduunka oo dhan. Iskaashiga cusubi wuxuu kaa caawin doonaa booska Qatar Airways ee gobolka oo dhammaystira istaraatiijiyadayada fidinta Afrika. Markaan isu diyaarinayno sidii aan u dabooli lahayn baahida sii kordheysa ee safarka muddada dheer la sugayay, waxaan arkaa iskaashi firfircoon sida kan oo gacan ka geysanaya hagidda safarka, dalxiiska iyo ganacsiga si adag waddada soo kabashada. ”
RwandaAir Madaxa Fulinta, Ms. Yvonne Makolo, ayaa tiri: “Kani waa guul weyn RwandAir waxayna calaamad u tahay bilowga safar cusub oo xiiso leh oo lala yeelanayo Qatar Airways. Waxaan sidoo kale aad ugu hanweynahay inaan Doha ku soo dhaweyno shabakaddeenna waddada, ku xiridda macaamiisha xarunta Qatar iyo sii ballaarinta khariidadooda duulimaadka.